Baraak Obama - Wikipedia
Madaxweynaha 44aad ee Maraykanka
Janaayo 20, 2009
Kasoo biloow Illinois
Aqalka odayaasha Illinois Banaadir
Deegaan nambar 13th
(1961-08-04) Agoosto 4, 1961 ( 60jir)
Michelle Obama (Oktober 3, 1992)
Malia (dhalatay 1998)
Sasha (dhalatay 2001)
Aqalka Cad, Washington, D.C.
Barack Xuseen Obama (US i/ˈrɑːk huːˈseɪn oʊˈbɑːmə/;; Af Ingiriis : Barack Husein Obama; ; wuxuu dhashay Ogosto 4, 1961) waa siyaasi isla markaana aha madaxweynihii 44 ee dalka Mareykanka , iyo qofkii ugu horreeyey ee Afrikan Ameerikan ah ee xilkaas qabta wuxuu ku dhashay Honolulu jasiiradaha Hawaii. Obama wuxuu ka qalin jabiyey jaamacadda Columbia University iyo dugsiga garsoorka jaamacadda harvard Harvard Law School, halkaasuu kasoo noqday madaxa Harvard Law Review.
Barack Obama waa nin dhalinyar ah oo aad u xargo badan ahna madaxweyna USA dadiisuna waa 47 jir. Waxa uu ku dhashay gobolka Hawaii bishii Juli 27 teedii, Sanadkii 1961 dii. waxaa iska dhalay Aabe dadka madow ah oo ka yimid wadaka Kenya iyo hooyo dadka cadaanka ah oo ka soo jeeda Gobolka Kansas ee wadanka Maraykanka Isaga iyo Afadiisa Michelle Obama, waxa ay leeyihiin laba gabdhood oo la kala yiraahdo Malia iyo Sasha Aabbihii waxa uu ka tagay isaga oo laba sano jir ah si uu waxbarashadiisa uga sii wato jaamacada Harvard. Kaddibna waxa uu dib ugu laabtay dhulkii uu ka yimid ee Kenya. Aabbiihiis kadib, Senator Obama hooyadii waxa ay guursatay nin ka yimid waddanka Indonesia. kadibna waxay u guureen wadankaasi oo ay ku noolayeen intii u dhaxaysay sanadihii 1969 kii ilaa 1971dii. Obama, markii uu dib ugu soo laabtay gobolka Hawaii ee ay hooyadii ku noqotay Indanusia, waxa uu halkaasi kula noolaa waalidiintii hooyadii dhashay ee cadaanka ahaa.
1 Buugaag uu qoray
2 Billowgii socdaalkiisa
4 Caqabadihii ka horyimid
5 Guulihii doorashada
6 Guusha madaxwaynanimada
Buugaag uu qoray
Buugga uu taariikh nololeedkikiisa ku qoray ee la yiraahdo Dreams of My father. Himilooyinkii Aabahay, waxa uu ku sheegay in uu isticmaalay Daroogo, marki uu yaraa ee uu ku korayay Hawai. Waxa uu wax ku bartay sadex jaamacadood oo ay ku jiraan Jaamacadaha Colombia iyo Harvad. Takhasuskiisi ugu danbeeyayna waxa uu ahaa culuunta sharciyada
Dhaqdhaqaaqa siyaasadeed iyo soo shaac-bixistiisa bulshada dhaxdeeda waxaa xudun u ahaa hawlihii iyo adeegii uu dakda laga tirada badanyahay uga qaban jiray magaalada Chicago Aqalka sanadka ee Gobolaka Illinois oo ahayd halkii uu ka soo fuulay masraxa siyaasadda, waxaa loo doortay sanadkii 1996 dii . Waxaanu aqalkaasi ka tirsanaa ilaa sanadkii 2004 tii. Sannadkii 2000 ayuu isu sharaxay in uu kamid-noqdo xubnaha gobolka Illinois ugu jira aqalka wakiilada. laakiin arintaasi uma suurto galin oo waa uu ku guuldaraystay. 2004 ayaa loo doortay aqalka Sanadka ee wadanka maraykanka isaga oo ku soo baxay codad ahaa 70%
Wadanka Maraykanka, waxaa markii ugu horaysay si wayn loogu aqoonsaday hadal soo jiidasho la haa oo uu ka jeediyay shir-waynihii sandkii 2004 tii uu xisbiga Dimuqraadigu ku caleemasaarayay musharaxoodii jagada Madaxwaynanimada ee John Kerry. Wax yar kadibna waxa uu Obama u muuqday in uu yahay laf-dhabarta xisbiga dimuqraadiga ee mustaqbalka. Sanadkii 2006dii, waxa uu dabaacay buugiisi labaad ee uu u bixiyay Audacity of Hope ama "Dhiiranaanta Rajada" oo noqday buuga markaas loogu gadashada badnaa.
Damaciisa musharaxnimada jagada Madaxwnanimada ee wadanka maraykanka, waxa uu ku dhawaaqay bishii February ee sanadkii 2007dii kadib marki ay dhawr todobaad uun ka hor musharaxnimadeeda ku dhawaaqday haweenaydii ay sida wayn u soo tartameen ee Senator Hillary Clinton, oo markaasi u muuqatay in aanu shaki ku jirin in ay helayso musharaxnimada xisbigooda dimuqraadiga. Senator Obama guushiisii ugu horaysay oo lama filaan ahayd, waxa uu ka helay gobolka Iowa.. Intii ka danbaysana, guulba guul ayay u dhiibtay marka laga reebo Gobolka New Hampshire oo ay saadashu ahayd in u ku guulaysto laakiin ay senator Hillary codkiisa heshay . Musharaxnimada Senator Obama waxaa taageeray dad badan oo magac kuleh Xisbigiisa ay hor kacayeen qoyska reer Kennedy oo ku tilmaamay in uu yahay nin leh sifooyinkii Madaxwayne Kennedy oo kale kana soo bixi kare xilka madaxweynenimo
Caqabadihii ka horyimid
Senator Obama, intii uu ku jiray tartankii xisbiga dimuqraadiga dhaxdiisa waxaa ka hor yimid turun-turooyin badan oo ay kamid ahaayeen fadeexad la xidhidhay nin wadaad ka ahaa kaniisad uu senator Omaba xubin ka ahaa mudo dheer oo labaatan sano gaaraysay. Waxaa soo shaac baxay, cajalado laga duubay wadadaadkaas oo muujinayay nacayb badan oo uu u qabo wadanka maraykanka.. markii danbana kalifay in uu senator Obama xadhiga ka goosto kaniisadaasi. Waxaa kale oo iyana hari-waayay eedaymo ku saabsan in uu xiriir la’ leeyahay dad xagjira oo ka soo horjeeda danaha wadanka maraykanka iyo shaki ay dadka qaaarkiis ka muujiyeen Diinta uu dhab ahaan u aaminsayahay. Taas oo ay u cuskanayeen magaciisa dhaxda ku jira ee Hussein iyo qaraabadiisa haysata diintaasi islamka.
Bishii Jun 3 dii , ayuu Senator Obama sheegtay in uu helay codadkii lagu hananayay musharaxnimada xisbigiisa dimuqraadiga. July 18 keediina, waxa uu safaro ku kala bixiyay wadamo ku yaala Bariga dhexe, Afghanistan iyo yurub oo si wayn loogu soo dhaweeyay Bishii August 23 keedii, waxa uu madaxwayna ku xigeen u doortay Senator Joe Baden oo laga soo doorto gobolka Delaware. In badana ku soo jiray Aqalka sanadka Maraykanka laguna timaamo in uu khibrad dheer u leeyahay arimaha xiriirka caalamka. Bishii Augest 28 keedii, Xisbiga Dimuqraadiga ayaa Senator Obama si rasmi ah ugu caleemasaaray magaalda Denver ee Gobolka Colorado in uu yahay musharaxa xisbigooda ee jagada Madaxwaynenimada wadanka Maraykanka.
Guusha Natiijada uu Barack Obama ka soo hooyay doorashada ayaa loo tirinayaa in ay salka ku hayso dhawr arimood. Waa tan koobaade: xaalada uu wadanku ku jiray oo saamaxday in ay dadka Maraykanku isbadal u oomanaayeen Tan labaad, waa isaga oo u muuqday in uu yahay nin isbadal dhalin kara oo dadkana midaynkara, Mida sadexaad ayaa ah, sidii uu u dhaqmay markii ay soo baxday qalalaasihii dhaqaale ee ka dhacay Maraykanka iyo talaabooyinkii uu sheegay in uu qaadayo si wax looga qabto arimaha dhaqaalaha. Tan ugu danbaysa ayaa ah sida uu uga soo hor jeeday dagaalka u Maraykanku ku qaaday wadanka Ciraaq
↑ . December 24, 2005 http://www.chicagotribune.com/news/chi-051224obama-story.html. Maqan ama ebar |title= (caawin)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Baraak_Obama&oldid=155782"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 10 Abriil 2016, marka ee eheed 05:16.